သူတို့တကယျခဈြတဲ့သူအတှကျပဲ မကျြရညျကတြတျကွတာပါ – Shinyoon
မိနျးမတှကေ ကိုယျ့ကို မကျြရညျကအြောငျ လုပျတဲ့သူကိုပဲ တမျးတမျးစှဲခဈြတတျကွတယျတဲ့ အဲ့အထငျက တကယျကိုမှားပါတယျ ။ မိနျးကလေးဆိုတာကလေ . . . .မကျြကအြောငျ လုပျတဲ့သူကို ခဈြတာမဟုတျပဲ သူတို့တကယျခဈြတဲ့သူအတှကျပဲ မကျြရညျကတြတျကွတာပါ ။ သူတို့မခဈြတဲ့သူအတှကျဆိုရငျလေ . . မကျြရညျကဖို့မပွောနဲ့ မခဈြရငျ သရေပါတော့မယျဆိုရငျတောငျ ပွနျပွီး လှညျ့မကွညျ့တတျကွဘူး ။
တကယျခဈြတဲ့ မိနျးကလေးဆိုတာ . . .သူခဈြတဲ့ သူ ဆိုးသှမျးနရေငျတောငျ ခှငျ့လှတျဖို့ကွိုးစားတယျ ။ လှယျလှယျလေး လကျမလှတျတတျကွဘူးလေ . . .သူ့တို့က အစှဲအလမျးကွီးကွတယျဆိုတာထကျ ပွောငျးလဲစခေငျြကွတယျဆိုရငျ ပိုပွီးမှနျပါလိမျ့မယျ ။ မိနျးကလေးဆိုတာမြိုးက ကိုယျခဈြတဲ့သူအတှကျ ဘာမဆို ပွောငျးလဲပေးဖို့အသငျ့ရှိသလိုမြိုး တဈဖကျကိုလဲ ရှိစခေငျြပါတယျ ။
ဖုနျးတှမေဆကျရငျတောငျ မအားလို့နမှောပါဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ဖွညျ့ပွီးတှေးတယျ ။ သူအလုပျတှမြေားနတောနမှောပါ . . .သူ တဈခုခုလုပျနလေို့နမှောပါ စသညျဖွငျ့ပေါ့ မိနျးကလေးတဈယောကျမှာ သူခဈြတဲ့သူကို ကာကှယျဖို့ဖာထေးပေးဖို့အကွောငျးပွခကျြ အမြားကွီးရှိနနေိငျပါတယျ ။ တဈဖကျမှာ နဲနဲလေး ပွနျဂရုစိုကျတတျရုံနဲ့ ကနြေပျနတေတျတာမြိုးပေါ့ ။
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့အခဈြက ထူးဆနျးတယျဆိုတာထကျ ပိုပွီးတော့ကို ထူးဆနျးပါတယျ…သူ့ကို တဈနလေုံ့းမကျြရညျကစြရေငျတောငျ ပြျောစတေဲ့ခဏလေးကိုတှေးပွီး ပိုပွီးခဈြတတျကွ ကွငျနာတတျကွတာမြိုးပေါ့ ။ ငိုရတဲ့အခိုကျအတနျ့နဲ့ ပြျောရတဲ့အခိုကျအတနျ့ဘယျတော့မှ ယှဉျပွီးမတှကျဘူး ပြျောစခေဲ့တာတှကေိုပဲ ပွနျပွီး တှေးပွီး ကွညျနူးတတျတာပါ ။
သိပျခဈြတတျတဲ့ မိနျးကလေးဆိုတာ … သူခဈြတဲ့ လူတဈယောကျမှားနတေဲ့အခါ စှနျ့လှတျလိုကျဖို့ထကျ ခှငျ့လှတျပေးဖို့ကို အရငျဆုံးတှေးတတျတာပါ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့ အဖွတှေေ ရှငျးလငျးနရေငျတောငျ မဟုတျလောကျပါဘူးဆိုပွီး တဈဖကျလှညျ့နဲ့တှေးပွီး နားလညျပေးခငျြ နားလညျတတျတာမြိုးလေ ။
သူ့ကို မခဈြမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ မနခေငျြမှနျးသိသိရဲ့ဆှဲထားတတျတာမြိုးမဟုတျဘူး တဈနကေ့ရြငျ အရငျကလို ခဈြကောငျးပါရဲ့ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့အခဈြတှကေို နားလညျကောငျးပါရဲ့ဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ ဆှဲထားတတျတာပါ ။ အဲ့ဒီ မြှျောလငျ့ခကျြလေး ရှိနသေမြှ လကျလှတျလိုကျဖို့ခကျတယျလေ ။
မိနျးကလေးဆိုတာ . . .သူ့ကို နာကငျြစတေဲ့သူ မကျြရညျကစြတေဲ့သူကို ခဈြတာမဟုတျပါဘူး သူ သိပျခဈြတဲ့သူကွောငျ့ပဲ သူ့မှာ နာကငျြရပွီး မကျြရညျတှေ ကရြတာပါ ။
မိန်းမတွေက ကိုယ့်ကို မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်တဲ့သူကိုပဲ တမ်းတမ်းစွဲချစ်တတ်ကြတယ်တဲ့ အဲ့အထင်က တကယ်ကိုမှားပါတယ် ။ မိန်းကလေးဆိုတာကလေ . . . .မျက်ကျအောင် လုပ်တဲ့သူကို ချစ်တာမဟုတ်ပဲ သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်ပဲ မျက်ရည်ကျတတ်ကြတာပါ ။ သူတို့မချစ်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်လေ . . မျက်ရည်ကဖို့မပြောနဲ့ မချစ်ရင် သေရပါတော့မယ်ဆိုရင်တောင် ပြန်ပြီး လှည့်မကြည့်တတ်ကြဘူး ။
တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ . . .သူချစ်တဲ့ သူ ဆိုးသွမ်းနေရင်တောင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် ။ လွယ်လွယ်လေး လက်မလွှတ်တတ်ကြဘူးလေ . . .သူ့တို့က အစွဲအလမ်းကြီးကြတယ်ဆိုတာထက် ပြောင်းလဲစေချင်ကြတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးမှန်ပါလိမ့်မယ် ။ မိန်းကလေးဆိုတာမျိုးက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက် ဘာမဆို ပြောင်းလဲပေးဖို့အသင့်ရှိသလိုမျိုး တစ်ဖက်ကိုလဲ ရှိစေချင်ပါတယ် ။
ဖုန်းတွေမဆက်ရင်တောင် မအားလို့နေမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဖြည့်ပြီးတွေးတယ် ။ သူအလုပ်တွေများနေတာနေမှာပါ . . .သူ တစ်ခုခုလုပ်နေလို့နေမှာပါ စသည်ဖြင့်ပေါ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ သူချစ်တဲ့သူကို ကာကွယ်ဖို့ဖာထေးပေးဖို့အကြောင်းပြချက် အများကြီးရှိနေနိင်ပါတယ် ။ တစ်ဖက်မှာ နဲနဲလေး ပြန်ဂရုစိုက်တတ်ရုံနဲ့ ကျေနပ်နေတတ်တာမျိုးပေါ့ ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အချစ်က ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာထက် ပိုပြီးတော့ကို ထူးဆန်းပါတယ်…သူ့ကို တစ်နေ့လုံးမျက်ရည်ကျစေရင်တောင် ပျော်စေတဲ့ခဏလေးကိုတွေးပြီး ပိုပြီးချစ်တတ်ကြ ကြင်နာတတ်ကြတာမျိုးပေါ့ ။ ငိုရတဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ ပျော်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ဘယ်တော့မှ ယှဉ်ပြီးမတွက်ဘူး ပျော်စေခဲ့တာတွေကိုပဲ ပြန်ပြီး တွေးပြီး ကြည်နူးတတ်တာပါ ။
သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ … သူချစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်မှားနေတဲ့အခါ စွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့ထက် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကို အရင်ဆုံးတွေးတတ်တာပါ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အဖြေတွေ ရှင်းလင်းနေရင်တောင် မဟုတ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး တစ်ဖက်လှည့်နဲ့တွေးပြီး နားလည်ပေးချင် နားလည်တတ်တာမျိုးလေ ။
သူ့ကို မချစ်မှန်းသိသိရဲ့နဲ့ မနေချင်မှန်းသိသိရဲ့ဆွဲထားတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး တစ်နေ့ကျရင် အရင်ကလို ချစ်ကောင်းပါရဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အချစ်တွေကို နားလည်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဆွဲထားတတ်တာပါ ။ အဲ့ဒီ မျှော်လင့်ချက်လေး ရှိနေသမျှ လက်လွှတ်လိုက်ဖို့ခက်တယ်လေ ။
မိန်းကလေးဆိုတာ . . .သူ့ကို နာကျင်စေတဲ့သူ မျက်ရည်ကျစေတဲ့သူကို ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး သူ သိပ်ချစ်တဲ့သူကြောင့်ပဲ သူ့မှာ နာကျင်ရပြီး မျက်ရည်တွေ ကျရတာပါ ။
တဈယောကျတညျး နတေဲ့အခါ . . . အတှေးတှကေို ဂရုစိုကျပါ
ခဈြလကျြနဲ့ ဝေးရတဲ့အဖွဈမြိုး ကြှနျမတို့နှဈယောကျနောကျဆုံးဖွဈပါစေ